IATA: lakile Travel Pass hanokafana soa aman-tsara ny sisin-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » IATA: lakile Travel Pass hanokafana soa aman-tsara ny sisin-tany
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) dia nanambara fa ao amin'ny dingana fampandrosoana farany ny IATA Travel Pass, pass de fahasalamana nomerika izay hanohana ny fanokafana soa aman-tsara ny sisintany.
Manomboka mampiasa fitsapana ny governemanta ho toy ny fitaovana hamerana ny loza ateraky ny fanafarana COVID-19 rehefa manokatra ny sisin-taniny ho an'ny mpandeha tsy misy fepetra arakaraka. IATA Travel Pass dia hitantana sy hanamarina ny fizotran'ny fitsapana ilaina na fampahalalana momba ny vaksinina eo amin'ny governemanta, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ny laboratoara ary ny mpandeha.
IATA dia miantso ny fitsapana COVID-19 voarindra ireo mpandeha iraisam-pirenena rehetra sy ireo fotodrafitrasa mikoriana ilaina mba hahafahana manohana an'io:
Ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny fitaovana hanamarinana ny maha-azo itokiana ireo fanandramana sy ny mombamomba ireo manolotra mari-pankasitrahana.
Airlines miaraka amin'ny fahaizana manome vaovao marina amin'ireo mpandeha momba ny fitakiana fitsapana ary manamarina fa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny dia ny mpandeha.
laboratoara miaraka amin'ny fitaovana hamoahana mari-pahaizana nomerika amin'ireo mpandeha izay eken'ny governemanta, ary;
mpandeha miaraka amin'ny fampahalalana marina momba ny fitakiana fitsapana, ahafahan'izy ireo manao fitiliana na vita vaksiny, ary ny fitaovana hampitana am-pahamendrehana ny mombamomba ny andrana amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny manam-pahefana.
“Mihidy roa ny sisin-tany ankehitriny. Ny fanandramana no lakileny voalohany ahafahana manao dia iraisam-pirenena nefa tsy misy fepetra momba ny karantina. Ny lakileny faharoa dia ny fotodrafitrasa fampahalalam-baovao manerantany ilaina amin'ny fitantanana, fizarana ary fanamarinana angona fitsapana mifanaraka amin'ny mombamomba ny mpandeha mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fifehezana sisintany. Izany no asan'ny IATA Travel Pass. Izahay dia mitondra an'io eny an-tsena ao anatin'ny volana ho avy mba hanomezana fahafaham-po ihany koa ny filan'ny bolongan'ny dia isan-karazany sy ny lalantsara momba ny fahasalamam-bahoaka izay manomboka miasa, ”hoy i Alexandre de Juniac, Tale Jeneraly sy tale jeneralin'ny IATA.
IATA Travel Pass dia mampiditra modely efatra misokatra sy mifangaro izay afaka mitambatra ho an'ny vahaolana farany-to-end:
Fanoratana eran-tany momba ny fitakiana fahasalamana - ahafahan'ny mpandeha mahita vaovao marim-pototra momba ny dia, fitsapana ary farany ny fepetra takiana amin'ny vaksiny amin'ny diany.
Fanoratana eran-tany momba ny ivontoerana fitiliana / fanaovana vaksiny - ahafahan'ny mpandeha mahita foibe fitiliana sy laboratoara eo amin'ny toerana fiaingany izay mahafeno ny fenitra amin'ny fitiliana sy ny vaksiny takiana amin'ny toerana alehany.
App Lab - ahafahan'ny laboratoara sy ivon-toeram-panadinana nahazo alalana hizara am-pahatokiana ny taratasy fanamarinana fitsapana sy vaksiny amin'ireo mpandeha.
Rindrambaiko Travelless contact - ahafahan'ny mpandeha (1) mamorona 'pasipaoro niomerika', (2) mahazo mari-pankasitrahana sy fanaovana vaksiny ary manamarina fa ampy amin'ny làlan-kalehany izy ireo, ary (3) mizara taratasy fanamarinana fitsapana na vaksiny amin'ireo zotram-piaramanidina sy manampahefana hanamorana ny dia. Ity fampiharana ity dia azo ampiasaina amin'ny mpandeha ihany koa hitantanana antontan-taratasy dizitaly sy tsy misy tohiny mandritra ny diany, hanatsara ny traikefan'ny dia.
IATA sy International Airlines Group (IAG) dia niara-niasa tamin'ny fampandrosoana ity vahaolana ity ary hanao fitsarana hanehoana fa ity sehatra ity miaraka amin'ny fitsapana COVID-19 dia afaka manokatra ny dia iraisam-pirenena ary manolo ny quarantine.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia mitaky vahaolana mahomby, manerantany ary maodely hanombohana soa aman-tsara ny dia. IATA Travel Pass dia mifototra amin'ny fenitry ny indostria sy ny traikefa efa voaporofo an'ny IATA amin'ny fitantanana fampahalalana momba ny fitakiana fivezivezena sarotra.
IATA's Timatic dia ampiasain'ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana hitantanana ny fanajana ny lalàna momba ny pasipaoro sy ny visa ary izy ireo no ho fototry ny fisoratana anarana eran-tany sy ny fanamarinana ny fitakiana fahasalamana.
ID iray an'ny IATA Ny fandraisana andraikitra dia notohanan'ny fanapahan-kevitra tamin'ny fivoriambe faha-75 taonany tamin'ny taona 2019 mba hanamorana ny fizotry ny dia amin'ny alàlan'ny famantarana tokana. Io no fototry ny IATA Contactless Travel App ho fanamarinana ny mombamomba azy izay hitantana ny mari-pankasitrahana koa.
“Ny laharam-pahamehanay dia ny fampandehanana ny olona mandeha soa aman-tsara. Amin'ny fe-potoana eo noho eo izay midika hoe manome fahatokisan-tena amin'ny governemanta fa ny fitsapana COVID-19 voarindra dia afaka miasa ho solon'ny takin'ny quarantine. Ary hivoatra ho programa vaksinina izany amin'ny farany. Ny IATA Travel Pass dia vahaolana ho azy roa. Ary namboarinay tamin'ny alàlan'ny fomba maodely mifototra amin'ny fenitry ny loharano misokatra mba hanamorana ny fiaraha-miasa. Izy io dia azo ampiasaina miaraka amin'ireo mpamatsy hafa na toy ny vahaolana maharitra maharitra. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fandraisany ny filan'ny indostria eo am-panaovana tsena fifaninanana ", hoy i Nick Careen, filoha lefitra zokiolona IATA, seranam-piaramanidina, mpandeha, karatra ary fiarovana.
Ny mpanamory fiaramanidina IATA Travel Pass voalohany dia voalahatra ho amin'ny faran'ity taona ity ary ny fanombohana dia natao tamin'ny telovolana 2021.